အခုတလော အလှူအကြောင်းလေးတွေပဲ ပြောဖြစ်တော့ အလှူနဲ့ပတ်သက်တာလေး ရေးမိပါတယ်။ လိုအပ်တာများရှိရင် လမင်းညံ့လို့ပါ။ အလှူအကြောင်းလေး တွေးမိတယ်၊. ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အလှူလှူကြတာ ဘာအတွက်ကြောင့်လဲ ဂုဏ်သ်ိက္ခာကြောင့်လား၊ အကျိုးမျော်လင့်ခြင်းလာ၊ နာမည်ကြီးခြင်းကြောင့်လား။ မလှူမဖြစ်လို့ လှူခြင်းလား၊ အခုနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထွန်းကားဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ၊ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းကြတယ်။ ခက်တာက မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးတွေပါ။ အဲလိုပြောရင် ကိုယ့်လူမျိုးကို နှိမ်ရာရောက်နေမလားပဲ၊ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းလွန်လို့ ရေးမိတာပါ။
ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ မျက်နှာကြက်၊ မုခ်ဦး၊ ပြတင်းပေါက်၊တံခါးမကြီး၊ ဘုရားခန်း၊ လိုအပ်တာတွေက အများကြီးပါ။ အလှူရှင်များက အပေါ်မှာပြထားတဲ့ နေရာတွေ ပဲလှူချင်ကြတယ်၊ အိမ်သာ၊ကြမ်းပြင်တို့လို နေရာမျိုးတော့ လှူမဲ့သူမရှိကြဘူး။ ကြမ်းပြင်လှူရင် သူများခြေဖျားအောက်ရောက် ရတယ်.။ အိမ်သာလှူရင် သူများ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်တဲ့နေရာတဲ့ ကြားလိုက်တော့ စိတ်ထဲအရမ်းကို မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ခုလို အကျိုးမျော်လင့်ပြီး လှူတာမျိုးတွေက အခြားဘာသာလူမျိုးတွေ သိရင်ဘယ်လောက် ရှက်စရာ ကောင်းလိုက်မလဲ။ ဟိုတလောကတောင် youtube .မှာ နိုင်ငံခြားသား မောင်သာနိုး ပြောသွားတာကြားတော့ ရှက်မိပါတယ်။ လမင်းတို့ မြတ်စွာဘုရားဟော ထားပြီးသာပါ။ လှူလိုက်ပြီးဆို အကျိုးကရပြီးသားပါ.။ စိတ်မထားတတ်ကြတာကိုေ ပြောချင်တာပါ။
အခု ဆောက်လုပ်ဆဲကျောင်းကို ကိုရီးယား၊ ဂျပန်တွေကလည်း လှူကြပါတယ်။သူတို့တွရဲ့ စိတ်ထားကရှင်းတယ်။ ကျောင်းအတွက်တဲ့ လိုရာသုံးနိုင်ပါတယ်တဲ့လေ အဲလိုလေးတွေ ယှဉ်လိုက်ရင် ကိုယ်လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ထားလေးတွေကို တကယ်ကိုဝမ်းနည်းမိတာပါ။. အခြားဘာသာဝင်တွေသိရင်လည်း တကယ်ကို စိတ်မကောင်းစရာပါ။ အလှူလှူတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် ဘာကြောင့်လှူတာလဲ ဘာဖြစ်လို့ လှူတာလဲကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားစေချင်တယ်။ အကျိုးမျှော်လင့်၍လား၊နာမည်ကြီးချင်၍လား မကောင်းတတ်၍လား မလှူမဖြစ်လို့လား။
လှူလိုက်ပြီဆိုထဲက ကိုယ်ရှိတဲ့ ချွေးနှဲစားလေးကို လှူခြင်းပါ၊ စိတ်စေတနာ ကောင်းကောင်းလေး ထားပြီးလှူလိုက်ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲနော်.။ လမင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တရားနဲ့နီးကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားမသိကြဘူးလို့ ပြောရင်စိတ်မဆိုးနိုင်ပါ..အခုနေတဲ့ နိုင်ငံတွေက လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ထားပုံလေးကို နည်းနည်းပြောကြည့်မယ်နော်။.သူတို့မှာ နောင်ဘ၀ဆိုတာမရှိကြဘူး။. ဒါပေမဲ့သူတို့ အရမ်းကိုလှူကြတယ်။ကူညီစရာရှိတာကို အစွမ်းကုန် ကူညီနိုင်ကြတယ် လူမျိုး၊ဘာသာ၊ နိုင်ငံဘာမှမခွဲကြဘူး ဘာလို့ အဲလိုစိတ်မျိုးထားနိုင်ကြတာလည်းလို့ ထင်လဲ ။သူတို့တွေ တရားနဲ့ဝေးကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားရှိကြတယ်လို့ပြောရင် လွန်များနေမလား။ သူများနိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို အထင်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို အကောင်းမြင်ချင် ဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ ရေးမိတာပါ။
သူတို့တွေက အကောင်းဆုံးကိုလုပ်တယ် အကျိုးမျော်လင့်တဲ့ စိတ်မရှိကြဘူး သူတို့ကတော့ လှူတယ်လို့တော့ သုံးမယ်မထင်ဘူး သူတို့တတ်နိုင်တာ လုပ်တာကိုပေးကမ်းတယ် ကူညီတယ် စိတ်ရှင်းတယ်။ ဒါကြောင့်ထင်တယ် အကျိုးပေးကောင်းတယ် ။လမင်းတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ မလှူကြတာ မဟုက်ပါဘူး။ အရမ်းကိုလှူကြပါတယ်။ စိတ်မထားတတ်တော့ အကျိုးနည်း ကုန်ကြတာပေါ့။ စေတနာကအဓိကလို့ ဘုရားရှင် ဟောထားတော်မူပါတယ်။ ညောင်ပင်လောက် လှူပြီး ညောင်သီးလောက်ပဲ ရတယ်ဆိုတာ စေတနာကို အရင်ခံပြီးပြောခြင်းပါ.. လှူလိုက်ပါ စေတနာသန့်သန့် စိတ်ထားကောင်းလေးနဲ့ လှူပြီးသွားရင် အမျှဝေလိုက်ပါ။
ပြန်စဉ်းစားပြီး ပီတိဖြစ်ပါ ကုသိုလ်ယူပါ။ ဘာဖြစ်ရပါလို၏ နောင်သံသရာအကျိုး မျော်လင့်မနေပါနဲ့။လှူလိုက်ပြီးဆိုထဲက ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး နိဗ္ဗာန်မရမချင် အကျိုးပေးသွားမှာပါ။ စာရေးတာ နည်းနည်း ရှည်သွားပြီထင်တယ်။ သည်းခံဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။။.လှူတာနဲ့ပက်သက်လို့ အများကြီးပါ.။ အတိုဆုံးနဲ့လိုရင်ကို ရေးခြင်းပါ။ လိုအပ်တာများရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ။ ဆရာလုပ်ချင်း မဟုက်ပါ။ စိတ်ထဲရှိတာလေး ရေးမိတာပါ။ နားလည်ပေးနိုင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။. သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေအားလုံး လှူတတ်ကြပါစေ....
Posted by ချစ်စံအိမ် at 3:25 PM
mstint April 21, 2012 at 4:49 PM
လှူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လမင်းလေးရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးလေးမျိုး ပို့စ်တစ်ခုမှာ ဖတ်ဘူးသေးတယ်။ ဂန္ဓာရုံဥယျာဉ်တိုက်က ဆရာတော်ရဲ့ 'အလှူပေး အလှူခံ ရုပ်နဲ့နာမ် လှူနေတာက ရုပ်အစု မမြဲအနိစ္စ' ဆိုတာကို ရင်မှာကိန်းဝပ်ပြီး စေတနာသုံးတန် ပြတ်သားတဲ့အလှူ ဘယ်လိုအလှူမဆို အလှူမြောက်တယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
နွေလ April 21, 2012 at 8:19 PM
မြတ်ကြည် April 21, 2012 at 10:05 PM
အစ်မလမင်းပြောတာ ထောက်ခံတယ်။ အမှန်တော့ လှူပြီဆိုကတည်းက စိတ်သန့်သန့်နဲ့ လှူတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် April 21, 2012 at 10:14 PM
စံပယ်ချို April 21, 2012 at 11:45 PM
Snow May April 22, 2012 at 1:57 AM
ဒါမျိုးလေးတွေ ရေးတာ အ၇မ်းကောင်းတယ် မမ..တချို့လှူတဲ့သူတွေမှာ အဲလိုမျိူးဖြစ်ကြတာ ကြုံဖူးတယ်
ရာဇာထွေး April 22, 2012 at 4:49 AM
အင်းရောက်တာ နောက်ကျသွားပြန်ပြီ( ကားတိုးစီးနေရလို့ :P)
အလှူနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ လှူတဲ့နေရာ မှာ လှူတတ်ဖို့ အသိပေး
ပို့စ်လေးပါ ညီမလေးရေ... အပေါ်မှာ အန်တီတင့်ပြောသလို
ပါပဲ လှူတဲ့နေရာ စတနာသုံးတန် ပြတ်သား ဖို့ပဲအရေးကြီးတာ
ပါ... အကိုတော့ သူများမလှူချင်တဲ့နေရာမျိူးပဲ လှူချင်ပါတယ်..
ရေများရာ ရေစက်ကျတာ ထက် ရေမရှိနေရာ မှာ ရေစက်ကျ
တာ ပိုလိုတောင်အကျိုးရှိပါတယ် ညီမလေးရေ...
ရင်ဆူး April 22, 2012 at 7:40 AM
မကြီးလမင်းရေ လှူပြီဆိုမှတော့ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့လှူနိုင်ကြရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ...နည်းသည်များသည်က အရေးမကြီးပါဘူး...စေတနာသန့်သန့်နဲ့ လှူနိုင်ဖို့ကသာ အရေးအကြီးဆုံးပါ..လှူတာနဲ့ပါတ်သက်ရင် အများကြီးပါဘဲ ..ပြောလို့လည်းမကုန်ပါဘူး.......